एक झलक -SOUQ WAQUIF को - Own Things ~ आफ्नै कुरा
एक झलक -SOUQ WAQUIF को
प्रकाशित गरिएको मिति : 29 November 2008
QATAR को मुटु मानिने NATIONAL नेर SOUQ WAQUIF लाई CULTURE OF QATAR भनेर चिन्न सकिन्छ यहाँ QATAR का हरेक Traditional कुराहरु हेर्न र पाउन सकिन्छ । यहाका हरेक साझहरु धपकै बलेका हुन्छन् - विशेष त बिहीबार र शुक्रबार को बेलुका -धमाका नै हुन्छ । एस्तो याद आउछ - कतै म 'माई मेला'(झापा)मा त रमिरहेको त छुइन ? भिड अत्यधिक हुन्छ । बस्ने र छिर्ने ठाउँ नै पाइदैन र Security पनी गजब नै हुन्छ , जसलाई पाए त्यसलाई बिना काम जान दिदैन - ID CARD हेरी चेक गर्छ ।
विगत केही समय देखि यहाँ धेरै होटल र RESTAURANT हरु खोलिएका छन । अहिले आएर GOVERNMENT ले यसको ढाचा र व्यबस्था मा केही चेन्ज गर्दै गैरहेको छ ।
होटल र रेस्टुराहरुको लाइन । सबै Traditional छन, कुनै पनी सप आधुनिक तरिकाले SOUQ भित्र बनाउने अनुमति कसैलाई छैन । यो नै यहाको राम्रो पक्ष हो । अनि मौलिकता पनी ।
SOUQ को अर्को प्रमुख -महत्वोपूर्ण विशेषता मा'हुका'नम्बर १ हो । अधिकांस मनीशहरु हुका तान्न नै आउने गर्दछन -पुरै FAMILY -बालक देखि वृद , महिला सबै । गाजा तान्ने केटाहरुको याद दिलाउछ । SAME उस्तै छ यहाको दिर्श्य ।
SOUQ को अर्को विशेषतामा - ART CENTER पनी एक हो । धेरै राम्रो र ठुलै छ - यहाँ धेरै विशिस्ट व्यक्तिहरुको भेला हुने-संगम स्थल पनि हो । राज परिवार , मन्त्रिहरू ,कलाकार , गायक -गाईकाहरुको आउने-जाने र प्रोग्राम गर्ने ठाऊ हो । साथै देशी र विदेशी बिधार्थीहरुको भर्मणक्षेत्र पनी भएको छ ।
चित्रहरुमा हराउदा आफैलाई आनन्द आउदछ- जती हेरी रह्यो उती हेरी रहू जस्तो ।
SOUQ बाट हेर्दा - MUSLIM CULTURE CENTER को टुपो , जून नेशनल मा छ फिलीपीनी मार्केट नजिकै ।
CITY CENTER BUILDINGको CARIFORE भित्र रहेको निर्जिब जू प्लेसमा भएको डाइनासोरको अवशेश ।
दीपक जडित said... November 30, 2008 at 3:03 AM
तमाखुको लत बसेकोलाई खालपरिका हुक्का देखाउनु भयो - तानुँ तानुँ लाग्यो है ।
Basanta Gautam said... December 1, 2008 at 4:56 AM
धन्यबाद बेदनाथजी, जानकारी र फोटोहरु बाँड्नुभएकोमा। कतारको बारेमा अरु पनि लेख्दै गर्नुहोला।
अनि यो 'हुका'मा हुनेचाहिँ सूर्ती, गाँजा के हो?
Dilip Acharya said... December 1, 2008 at 9:17 AM
आधुनिकता भित्र पनि परम्परागत संस्कृति धानेर रहेको SOUQ WAQUIF को चिनारी रमाईलो लाग्यो ।
अनी दीपक जी फोटो मात्रे हेर्दा पनि कस्तो भा' को हो?
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) said... December 5, 2008 at 11:09 AM
दीपक जी , बसन्त जी ,र दिलीप जी लाई कमेन्ट को लागी धन्यवाद !
बसन्त जी ले सोधनु भएको रहेछ -यो 'हुका'मा हुनेचाहिँ सूर्ती, गाँजा के हो? "भनेर हुका मा सूर्ती, गाँजा केही नभएर एक किसिमको Tobacoo हुन्छ -Apple, Grape, Strawberry, Mint, Salloum , Zaghlul Flavor हरु धेरै किसिम का tobacoo हरु use गरिन्छ ।